Másmovil၌သင်တို့၏နှုန်း၌နှစ်ဆဖျော်ဖြေပွဲရယူပါ။ | Androidsis
ဒီအပတ် MásMóvilက Black သောကြာနေ့အတွက်အထူးကမ်းလှမ်းချက်အသစ်ကိုကြေငြာလိုက်သည်, သင်ဆဲ၏အားသာချက်ယူနိုငျကွောငျး ဒီမှာ။ သို့သော်အော်ပရေတာသည်ရပ်တန့်ခြင်းမရှိဘဲကျွန်ုပ်တို့အားဤရက်သတ္တပတ်အတွက်အရောင်းမြှင့်တင်မှုအသစ်များယူဆောင်လာသည်။ အော်ပရေတာကဘာတွေကမ်းလှမ်းတာလဲ။ ယခုအပတ်မှသာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏နှုန်းထားဖြင့်နှစ်ဆဖျော်ဖြေမှုပြုလုပ်နိုင်သည်.
ဤသည်မှာသီးသန့်နှင့်ယာယီမြှင့်တင်ရေးဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့နိုဝင်ဘာ 27 သည်အထိရှိသည် ဒီထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းကနေအကျိုးခံစားရဖို့ (တနင်္လာနေ့) ။ အကယ်၍ သင်သည်MásMóvilဖောက်သည်ဖြစ်လာရန်စဉ်းစားနေပါကဤမြှင့်တင်ရေးအသစ်သည်လုပ်ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါနှုန်းထားများနှင့် ပတ်သက်၍ ထပ်မံပြောပြပါ ဦး မည်။
ဒီမြှင့်တင်ရေးဖြစ်လိမ့်မည် နှစ်ခုအဓိကနှုန်းထားများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် အရာများအတွက်ကုမ္ပဏီကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်း။ ဒီနှုန်းထားများမှာနှစ်ဆဖျော်ဖြေမှုတွေရလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာနက်နှုန်းသည်အကန့်အသတ် ရှိ၍ စိုးရိမ်စရာမလိုဘဲအွန်လိုင်းတွင်ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
၏ပထမ ဦး ဆုံး Másmovilကကမ်းလှမ်းသည် Fiber 300 Mb +4GB ဖြစ်သည်။ အခုဒီမြှင့်တင်ရေးနဲ့ငါတို့ရ4GB ကို အပိုဆောင်းပိုက်ဆံပေးဆောင်စရာမလိုဘဲအပိုဆောင်း။ ဒါတွေကိုငါတို့ယူနိုင်ပါတယ် Fib of 300 Mb + စုစုပေါင်း 8 GB နှုန်းဖြင့်တစ်လလျှင်ယူရို ၁၉.၉၀၊။ လိုင်းကြေးအပြင်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူMásmovilကမ်းလှမ်းသောအခြားနှုန်းမှာနှုန်းထားဖြစ်သည် ဖိုင်ဘာ 300 Mb + 8 GB။ အရင်နှုန်းအတိုင်းလိုပဲ၊ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်ခါဖျော်ဖြေပေးတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ထပ် 8 GB ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ရ 300MB ဖိုင်ဘာနှင့် 16GB ဤအရာအားလုံးကိုတစ်လလျှင်ယူရို ၂၄.၉၀ သာဖြစ်ပြီးခြောက်လအတွက်ဖြစ်သည်။ Plus အားလိုင်းကြေး။
ဒီနှစ်ခုနှုန်းထားများဖြစ်ကြသည် ခြောက်လကာလအဘို့တရားဝင်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင်အလုပ်ခန့်ရန်စိတ်ဝင်စားလျှင်ယခုသင်လုပ်နိုင်သည်။ The တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာ ၂၇ သည်နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်သည် သောငါတို့သည်မြှင့်တင်ရေးကနေအကျိုးရှိနိုင်သည်။ စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်? သင်သည်ဤနှုန်းထားများနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလေ့လာပြီး ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်စာချုပ်ချုပ်နိုင်သည် မိုဘိုင်းပိုမို။ သူတို့ကိုမလွတ်မြောက်ပါစေနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ယခုအပတ်တွင်MásMóvil၌သင်တို့၏နှုန်းထားကိုနှစ်ဆလိုက်စားပါ။
Huawei သည် Samsung ကို၎င်း၏မြှင့်တင်ရေးဗွီဒီယိုအသစ်တွင်ပြုံးသည်